Fampidinana fampiharana GradeUp ho an'ny Android [Fanavaozana 2022] | APKOLL
Fampidinana fampiharana GradeUp ho an'ny Android [Fanavaozana 2022]
Manana olana amin'ny fitsapana fanabeazana na fitsapana asa ve ianao? Raha eny, eo amin'ny toerana mety ianao, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao, izay ahafahanao manatsara ny fahalalanao sy miomana ny tenanao. Raiso ny fahalalana sy ny fampahalalana rehetra amin'ny fampiharana App ho an'ny Smartphone na Tablet-nao Android.
Amin'izao fotoana izao dia voakasik'izany avokoa ny sehatry ny fianan'ny zanak'olombelona, ​​noho ny aretina. Ny sehatry ny fanabeazana dia misy fiantraikany betsaka indrindra, izay tsy ahazoan'ny mpianatra sy ny mpianatra hafa loharano tsara indrindra. Misy fampiharana samihafa azo alaina ho an'ireo mpianatra, izay ahafahan'izy ireo mianatra amin'ny Internet.
Saingy misy fotoana, voakasik'izany ireo fampianarana hafa. Tsy manana loharanom-pahalalana ny olona hiomanana amin'ny karazana fitsapana asa. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny vahaolana tsara indrindra ho anao rehetra, amin'ny alalàn'izay rehetra ahazoana vaovao sy fananana tsara indrindra hiomanana amin'ny fitsapana fidirana na fizahana.
Azonao atao ny mahazo ireo rehetra ireo sy ny maro hafa amin'ity rindranasa ity. Raha te-hahazo ny fahalalana rehetra momba ity rindrambaiko ity ianao dia mijanona miaraka aminay ary mianatra fiasa mahatalanjona bebe kokoa. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity ianao dia azonao atao ny mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Topimaso momba ny App GradeUp
Izy io dia fampiharana fanabeazana Android, izay manome tolotra tsara indrindra ho an'ireo mpianatra sy mitady asa. Manome fotoana azy ireo hanatsara ny fahaizany sy hiomanana amin'ny asa sy ny taratasiny. Sehatra maimaimpoana io, ahafahanao mahita ny serivisy rehetra maimaim-poana.
Manolotra fanangonana maro fanomanana fanadinana ho an'ireo mpampiasa izy ireo, amin'ny alalàn'izy ireo mahita ny karazana kilasy rehetra. Manome kilasy an-tserasera mivantana ho an'ireo mpampiasa izy io, amin'ny alalàn'ny mpampiasa hahafantatra tsara ny vaovao rehetra.
Ireo mpampiasa dia mila mandray anjara amin'ny fitsapana isan'andro sy ny quiz. Noho izany, ny mpandray anjara dia tsy maintsy mahazo fampiharana ary mianatra bebe kokoa ao an-trano. Ireo mpampiasa dia hahazo bounces fanampiny hanana fahombiazana tsara amin'ny quizs. Misy teboka samihafa azo alaina ho an'ireo mpampiasa, amin'ny alàlan'izany dia afaka mahazo fihenam-bidy isan-karazany ao anatin'ilay fandaharam-pianarana.
Arakaraky ny isa maitso ataon'ny mpampiasa no hahazo fihenam-bidy bebe kokoa ho an'ny mpampiasa. Izy io dia manome kilasy fiomanana ho an'ny mpianatra SSC, izay ahafahan'izy ireo miomana amin'ny fanadinana farany. Misy ny fanesoana sy andrana samy hafa hatao, izay tsy maintsy ataon’ny mpampiasa sy manome izay azony atao mba hahazoana vokatra tsara.
Amin'izao fotoana izao, ny GradeUp Apk dia tsy misy afa-tsy any India, izay manome endri-javatra bebe kokoa ho an'ny mpianatra Indiana sy mitady asa. ny App fampiharana manome karazana fiomanana fitsapana asa rehetra, izay ahafahan'izy ireo manana traikefa tsara amin'ny fidirana ofisialy amin'ny asa.
Misy mpanoro hevitra an-tserasera misy ho anao, izay mamaha ny olanao rehetra sy ny fanontanianao momba ny lohahevitra na zavatra rehetra. Raha mitady asa ianao, dia ho mailo amin'ny asan'ny governemanta rehetra eo amin'ity sehatra ity. Azonao atao ny mangataka mora foana amin'ilay asa ary mahazo ny fanomanana.
Noho izany, misy endri-javatra mahavariana an-taonina azo alaina ho an'ny mpampiasa, azonao zahana ao amin'ity rindrambaiko ity. Noho izany, sintomy ny fitaovana GradeUp For Android ary alao ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fianaranao. Raha manana olana ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy fikarakarana mpanjifa misy.
Anaran'ny fonosana co.gradeup
Sehatra tsara indrindra ho an'ireo mpianatra sy mpitady asa
Azo anaovana ny taratasy tamin'ny taona lasa
Vaovao farany momba ny asan'ny governemanta
Mahazoa fihenam-bidy amin'ny isa tsara
Fampiharana fanabeazana bebe kokoa ho anao.
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mitsidika sehatra maro ianao ary mandany ny fotoanao. Hizara ny fizotran'ny fisintomana haingana indrindra isika, tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana ary mila segondra vitsy. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
GradeUp App no ​​sehatra tsara indrindra hanatsara ny olona ny fahaizany sy ny fampahalalana azony. Noho izany, sintomy ary manomboka ampiasao. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags App fampiharana, GradeUp Apk, App GradeUp, GradeUp Ho an'ny Android Post Fikarohana